Website-ka al-kataib oo lagu soo bandhigay Muuqaalka Sarkaalkii Faransiiska aha ee ku jiray gacanta Xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab oo dalbanaya in la sii daayo. – Puntland Voice
June 10, 2010 9:13 am Views: 81
Sarkaalkii mudaba ku jiray gacanta Ciidamada xarakatu shabaabul Mujaahidiin ayaa markii ugu horeysay ka soo muuqday shabakada xarakadaasi ee Al-kataib.com isagoo aad u madluusan.
Sarkaalkaani dhanka nabad sugida ugu qaabilsan Faransiiska oo lagu magacaabo Denis Allex ayaa sanadkii hore bartamihiisii u gacan galay Xoogaga Islaamiyiinta Soomaaliyeed ayaa Dowlada Faransiiska waxaa uu ka codsaday inay deg deg ugu howlgasho sidii isaga lagu sii deyn lahaa.
Isagoo akhrinayay warqad afkiisa ku qoran ayuu ka dalbaday Dalka uu ka soo jeedo inay fuliyaan shuruudaha Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ku xireen sii deyntiisa sida in Ciidamada AMISOM ka baxaan Muqdishom,in Ciidamada Faransiisku ka baxaan Badda Soomaaliya, in wixii Maxaabiis laga hayo Xarakada la sii daayo iyo qodobo kale.
Lama oga sida Dowlada Faransiisku uga jawaabi doonto dalabka ka soo yeeray Denis Allex ee ku jira gacanta Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab iyadoo mudo sanad ah hore loo hayay sarkaalkaasi.
Sanadkii hore ayay ahayd markii labo sarakaal oo Faransiiska u wada dhalatay laga qabtay Muqdiso gaar ahaan Hotel saxafi oo ay daganaayeen iyadoo xero ciidan ay AMISOM ku leedahay ka soo horjeedak Hoteelka lagala baxay saraakiishaan,waxaana mudo kadib baxsaday mid ah saraakiishaasi Faransiiska iyadoo kii kale ay hada hayaan Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab.